Nagu saabsan - BAOTE Warshadaha Warshadaha CO., LTD
KOOXDA Warshadaha BAOTEoo ku taal "jasiiradda" quruxda badan ee magaalada Qingdao ee Shiinaha waa shirkad cusub oo cusub iyo farsamo casri ah oo dhaxalsiisa dhaqanka kana daba tagta hal-abuurnimada. BAOTE Group waxay leedahay seddex waaxood oo hoosaadyo kuwaas oo diiradda saaraya khadka ganacsiga ee kaladuwan.
Marka hore waa alaabada birta ah--- Dhamaan noocyada kala duwan ee caadiga ah iyo biraha aan caadiga ahayn, lowska, makiinada dhaqda guryaha, boolal iyo biinanka qashinka lagu shubo, weelka birta ah ee ku jira baaxada BAOTE Warshadaha Co,. LTD
Ta labaad waa baco--- Dhammaan noocyada boorsada boorsada, boorsada wasakhda ah ee bamka lagu buuxiyo, bacda laga qaado asbestos, bacda weyn ee pp; Dhammaantood waxaa soo saaray Hogaamiyaha dhabta ah ee Caaga ah.
Ta saddexaad waa Qingdao Rainbow Tech Co., Ltd, oo ah mashiinka biibiile laydhka ah ee Precast iyo alaab-qeybiye mashiinada caaga. Shayga waxaa ka mid ah gariirka mashiinka sameynta biibiile la taaban karo oo gariira 2005 iyo wuxuu si guul leh u soo saaray mashiinka dhuumaha extrusion extralion extralion kii ugu horeeyay ee taagan sanadka 2012. Khadka la adkeeyay ee la taaban karo ee la taaban karo (PCCP) sidoo kale waa baaxada.
Ku soo dhowow inaad soo booqato warshaddeena oo aan dhisno xiriir muddo dheer ah adiga.
Ku ixtiraam macaamiisheena adeegga ugu fiican, qiimaha tartanka, iyo tayada Deggan.
Dhaqanka asaasiga ah ee shirkadda
Aragtida ganacsiga: in dib loo soo nooleeyo warshadaha qaranka lana dhiso sumcad caalami ah oo caan ah.
Hadafka shirkadeed: Waxaad siisaa dadka isticmaala qaab dhismeedka golaha wasiirada korantada iyo nidaamka xakamaynta wakhti kasta.
Qiyamyada shirkadeed: si loo gaaro macaamiisha, loo abuuro qiimo, oo adduunka loogu daro wax dhalaalaya.
Qaabka shirkadaha: wada noolaanshaha, daacadnimada, waxtarka iyo hal-abuurnimada.
1. Istaraatijiyad shirkadeed: casriyeyn casri ah, kala duwanaansho suuqa, wax soo saar xeel dheer, iyo maareyn cilmiyaysan.
Mabda'a shaqada: dabeecada kowaad, awooda labaad.
Falsafada maamulka: dadka u janjeedha, u hoggaansama mabaadi'da.
Falsafada Suuqa: Ma jiro suuq aan la geli karin, mana jiro macaamiil aan lala xiriiri karin.
Shirkaddu had iyo jeer waxay fiiro gaar ah u leedahay maalgashiga tikniyoolajiyadda iyo hibada, waxay fiiro gaar ah u leedahay baahiyaha macaamiisha, waxayna dammaanad-qaadaysaa cilmi-baarista iyo horumarinta alaabooyinka cusub oo leh xoog farsamo oo xoog leh. Dhammaan tilmaamayaasha alaabooyinka la soo saaray waxay la kulmaan ama ka sarreeyaan shuruudaha farsamo ee mashiinka weyn waxayna ka gudbeen heerarka qaran ee la xiriira. Qiimaynta xirfadeed iyo aqoonsiga waaxda awooddu waxay ku guuleysatay sumcad wanaagsan suuqyada gudaha iyo dibadda.
Shirkaddu waxay aaminsan tahay mabaadi'da "macaamilka ugu horreeya, tayada u janjeedha", oo leh siyaasad tayo leh "ku guuleysiga tayada, ku dadaalka kaamilnimada", waxayna abaabushaa wax soo saar iyo hawlgal si waafaqsan heerarka nidaamka maaraynta tayada warshadaha iyo sharciyada qaranka ee la xiriira iyo xeerarka. Adeeg loogu celinayo macaamiisha iyo bulshada.
Qaab dhismeedka, Lag Bolts, Gawaarida Gawaarida, Mashiinka tuuboyinka Gawaarida Gawaarida ah, U Bolts, Hex handarraabbadeedii,